ပတ်ဝန်းကျင်မော်ကွန်းတိုက် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » Tag Archives: ပတ်ဝန်းကျင်
Tag Archives: ပတ်ဝန်းကျင်
Viaccess-Orcas IBC2017 ပြသခဲ့သည်ကို Preview
ဒါဟာစမတ်ပါပဲ။ ဒါဟာပိုလုံခြုံတယ်။ ဒါဟာ VO ပါပဲ။ အဆိုပါရုပ်သံနှင့်မီဒီယာပတ်ဝန်းကျင်ကိုလျှင်မြန်စွာပြောင်းလဲနေတဲ့ဖြစ်ပါတယ်: နေရာတိုင်းမှာတီဗီလျင်မြန်စွာပြောင်းလဲနေပါတယ်နှင့် OTT ပေးပို့ ပို. ပို. စားသုံးသူအကြားလူကြိုက်များသည်။ ဒါဟာလစာ-TV ကိုအော်ပရေတာများနှင့်ဝန်ဆောင်မှုပေးများအတွက်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အချိန်ပါပဲ။ ဒါပေမဲ့သူတို့ရုပ်မြင်သံကြားအတွေ့အကြုံကိုတိုးမြှင့်ဖို့လိုအပ်နေတဲ့ယှဉ်ပြိုင်မှုရှုခင်းအတွက်အမြတ်အစွန်းနေဖို့။ IBC2017 မှာ Viaccess-Orcas (VO), ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပံ့ပိုးပေး ...
မအမြင်ပေမယ့်တကယ်တော့ - မေးခွန်းများကို #IBC2015 မှာကိုယ့်ကိုကိုယ်မေးရန်
ပြီးခဲ့သည့်သီတင်းပတ်ကသမ္မတအိုဘားမားကအမေရိကန်နှင့်ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုလျှော့ချရန်ကမ္ဘာ၏ကြွင်းသောအရာများအတွက်လိုအပ်သောအစပျိုးအပေါ်သူ၏ "သန့်ရှင်းပါဝါ Plan ကို" စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ 2030 အသုံးပြုပုံအစီအစဉ်2အဆင့်ဆင့်ကနေ 32% အားဖြင့် utility ကိုကဏ္ဍကနေ CO2005 ထုတ်လွှတ်မှုလျှော့ချမယ်။ ဒါဟာစွမ်းအင်-intensive ကုန်ထုတ်လုပ်မှုတား, 15% ပျမ်းမျှအားဖြင့်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားစျေးနှုန်းများမြှင့်မယ်။ သမ္မတအိုဘားမားလည်းရာသီဥတုနှင့်ပတ်သက်ပြီးစကားပြော ...